China Precision Machining Parts Stainless Steel CNC Machining Services ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ - Youlin အတွက် အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > CNC > CNC Machining > CNC Machining ဝန်ဆောင်မှုများ
တရုတ် စိတ်ကြိုက် CNC Machining Services ပေးသွင်းသူများ
စာချုပ်ကို လိုက်နာပါ” ၊ စျေးကွက်လိုအပ်ချက်ကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမယ့် အရည်အသွေးကောင်းတွေနဲ့ စျေးကွက်ပြိုင်ဆိုင်မှုအတွင်း ဖောက်သည်တွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နဲ့ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ ပေးစွမ်းနိုင်စေမယ့် စျေးကွက်ပြိုင်ဆိုင်မှုအတွင်းမှာ ပါဝင်လိုက်ပါ။ China Precision Machining Parts Stainless Steel CNC Machining Services အတွက် Best Price for Best Price , We welcome new and old customers from all walks of daily living to speak to speak to us for upcoming business enterprise interactions and mutual accomplishment.
Best Price for China Precision Machining, Machining Services , We hope we can establish long-term cooperation with all of the customers, and hope we can improve competitiveness and achieve the win-win situation together with the customers. သင်လိုချင်သည့်အရာအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ရန် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှဖောက်သည်များအား စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့လာရောက်လည်ပတ်ရန် ပြည်တွင်းရောပြည်ပဖောက်သည်အားလုံးကို ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်နှင့် win-win စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော မနက်ဖြန်ကို ဖန်တီးပါ။
1. ကျွန်ုပ်တို့၏ CNC Machining ဝန်ဆောင်မှုများ
YOULIN CNC Machining Services သည် သင့်အား ပြီးပြည့်စုံသော လျင်မြန်သော ပုံတူပုံတူရိုက်ခြင်းနှင့် ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်အသစ်ကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဝင်ရိုးပေါင်းစုံကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့် လှည့်ခြင်းအပြင် နစ်မြုပ်ခြင်းနှင့် ဝါယာကြိုး EDM၊ မျက်နှာပြင်ကြိတ်ခြင်း၊ လေဆာထွင်းခြင်းနှင့် အခြားအရာများစွာကို ပေးဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် အဆင့်မြင့်စက်ပစ္စည်းအပြည့်အစုံရှိသည်။ ခေတ်မီဆန်းပြားသော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုစမ်းသပ်ကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ ကုန်ကြမ်းအားလုံး၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကို အပြည့်အဝလိုက်နာကြောင်းကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့အာမခံပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အမေရိကန်နှင့် ဥရောပဈေးကွက်အများစုကို လွှမ်းခြုံထားသော CNC စက်နှင့် ထုတ်လုပ်ရေးတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို မြှုပ်နှံထားပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် မင်းရဲ့ရှည်လျားတဲ့ လက်တွဲဖော်ဖြစ်လာဖို့ ငါတို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။
2. CNC Machining Services ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
CNC machining သည် စက်ယန္တရားများကဲ့သို့ လည်ပတ်နေသော ကွန်ပျူတာဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသော ဖြတ်တောက်သည့်ကိရိယာများကဲ့သို့ လှည့်ပတ်သည့်ကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ ပစ္စည်းအစိုင်အခဲတုံးတစ်ခုမှ ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားကာ အစိတ်အပိုင်းကို ပုံသွင်းရန်အတွက် CNC machining လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒီဇိုင်းဖိုင်များသည် ဘလောက်ကိုဖြတ်နည်း (â€œworkpieceâ€) ကို CNC စက်များအား ညွှန်ကြားပြီး စက်များစွာသည် တူညီသောဒီဇိုင်းဖိုင်ကို တစ်ချိန်တည်းတွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို အရှိန်အလွန်တိုးစေပါသည်။
CNC စက်ယန္တရားသည် ပလပ်စတစ်နှင့် သတ္တုမှသည် သစ်သား၊ ဖိုက်ဘာမှန်နှင့် အခြားအရာများပါရှိသော ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ထုတ်လုပ်သည့် အစိတ်အပိုင်းများအတွက် အလားအလာရှိသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
3. CNC Machining Services ၏ အားသာချက်များ
CNC Machining Services သည် လျင်မြန်သော ပုံတူရိုက်ခြင်းအတွက်သာမက ထုထည်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ဖြစ်စေနိုင်သော ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အားသာချက်များစွာရှိသည်။ ဤသည်မှာ သင်စဉ်းစားသင့်သောအရာဖြစ်သည်။
âœ” သတ္တုအမြောက်အမြားအပြင် အင်ဂျင်နီယာအဆင့် ပလတ်စတစ်အစေးများကို အမြန်ဖယ်ရှားခြင်း။
"" အလွန်တိကျပြီး ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နိုင်သည်။
âœ” ရှုပ်ထွေးသော ဂျီသြမေတြီများ ပြုလုပ်ရန် အထူးကောင်းမွန်သည်။
âœ” အလွှာအမျိုးမျိုးအတွက် သင့်လျော်သည်။
âœ” အတိုင်းအတာတစ်ခုမှ 100,000 အထိ
“ကိရိယာတန်ဆာပလာနှင့် ပြင်ဆင်မှုစရိတ်စက နည်းပါးသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
âœ” အစိတ်အပိုင်းများသည် အားပြည့်ပြီး ချက်ချင်းဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပါသည်။
âœ” ကောင်းမွန်သော မျက်နှာပြင် ပြီးမြောက်မှု
4. CNC Machining Services အတွက် ကုန်ကြမ်းများ
ကျွန်ုပ်တို့သည် မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ အပျော့စားနှင့် သံမဏိ၊ အလူမီနီယမ်၊ ကြေးဝါနှင့် တိုက်တေနီယမ်တို့အပြင် တင်းကျပ်သော အင်ဂျင်နီယာအဆင့် ပလပ်စတစ်အစေးများအပါအဝင် ပလပ်စတစ်နှင့် သတ္တုအလွိုင်းပစ္စည်းများနှင့် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ဤပစ္စည်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စံချိန်စံညွှန်းစာရင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့မှ သေချာစွာစစ်ဆေးပြီး အတည်ပြုထားသော ယုံကြည်စိတ်ချရသော ရောင်းချသူများထံမှ ချက်ချင်းရရှိနိုင်ရန်အတွက် အရင်းအမြစ်ကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်လိုအပ်ချက်များကို မည်သို့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်ကို လေ့လာရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ဆွေးနွေးရုံဖြင့် စူပါမာကျောသောသတ္တုစပ်များကဲ့သို့သော အထူးပစ္စည်းများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။
SS303၊ SS304၊ SS316၊ SS316L၊ SS430 စသဖြင့်
အပျော့စား သံမဏိ၊ ကာဗွန်သံမဏိ၊ 4140၊ 4340၊ Q235၊ Q345B၊ 20#၊ 45# စသဖြင့်
HPb63၊ HPb62၊ HPb61၊ HPb59၊ H59၊ H68၊ H80၊ H90 စသည်တို့။
C11000၊ C12000၊ C12000၊ C26000၊ C51000 စသည်တို့
AL6061၊ Al6063၊ AL6082၊ AL7075၊ AL5052၊ A380 စသည်တို့
ABS၊ PC၊ PE၊ POM၊ Delrin၊ Nylon၊ Teflon၊ PP၊ PEI၊ Peek။ ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ
5. CNC Machining Services အတွက် အပြီးသတ်များ
Ra value ကို အသုံးပြု၍ မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းမှုကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။ Ra3.2 - 1.6um စံနှုန်းအတိုင်း။
Polishing သည် အစိတ်အပိုင်းများကို ပိုမိုချောမွေ့တောက်ပသော ပြီးမြောက်စေရန်ဖြစ်သည်။
စံချိန်စံညွှန်းအတိုင်း 80um သဲဖောက်ခြင်းအရွယ်အစား။ 50-120um ရရှိနိုင်ပါသည်။
စံသတ်မှတ်ချက်- သဘာဝ၊ အနက်ရောင်၊ အနီရောင်၊ အစိမ်း၊ အပြာ၊ အဝါ/ရွှေ။
မေး- CNC စက်သည် ၀ယ်လိုအားရှိပါသလား။
A: ယနေ့ခေတ်တွင် လုပ်ငန်းတိုင်းလိုလိုတွင် စိတ်ကြိုက်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် အစိတ်အပိုင်းများအတွက် လိုအပ်ချက်မြင့်မားနေပါသည်။ CNC machining သည် OEMs များအား ဤစိတ်ကြိုက်အစိတ်အပိုင်းများကို စိုက်ထုတ်ဖန်တီးနိုင်စေသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ OEM အများအပြားသည် ထုတ်လုပ်မှုတွင် CNC Machining Services အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကို ထည့်သွင်းထားပြီးဖြစ်သည်။
Q: CNC စက်၏အနာဂတ်ကဘာလဲ။
A: CNC Precision Machining Flexibility
CNC Machining Services â€” တူးဖော်ခြင်း၊ grooving နှင့် routing ဥပမာ - â€” သည် လုပ်ငန်းစဉ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏ အရင်းခံဖြစ်သည်။ လေးဝင်ရိုးနှင့် ငါးဝင်ရိုး စက်ပစ္စည်းများကို တိုးမြှင့်အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ပုံတူရိုက်ခြင်းနှင့် ဒီဇိုင်းပိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍ CNC တိကျစွာ ပြုပြင်ခြင်းသည် ပိုမိုအဆင့်မြင့်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။
မေး- CNC machining prototyping ဆိုတာဘာလဲ။
A- CNC ရှေ့ပြေးပုံစံတွင် ထည့်သွင်းမှုအဖြစ် 3D အစိုင်အခဲမော်ဒယ် CAD ဒီဇိုင်းများကို အသုံးချခြင်းနှင့် ကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ကြိတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့် အစိတ်အပိုင်းကို အစိုင်အခဲပစ္စည်းမှ တိုက်ရိုက်ဖန်တီးခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။
hot Tags:: CNC Machining Services၊ တရုတ်၊ စိတ်ကြိုက်၊ OEM၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံ၊ တရုတ်တွင် ထုတ်လုပ်သည်
3D CNC Machining ဝန်ဆောင်မှုများ
5 axis cnc machining ဝန်ဆောင်မှုများ
cnc machining services အွန်လိုင်း